Ragga Lakabka leh oo la ogaaday in xishood dartii ay ku waayaan…(Sirta Nolosha) | Gaaloos.com
Home » galmada » Ragga Lakabka leh oo la ogaaday in xishood dartii ay ku waayaan…(Sirta Nolosha)
Ragga Lakabka leh oo la ogaaday in xishood dartii ay ku waayaan…(Sirta Nolosha)
Daraasad la sameeyay ayaa sheegeysa in ragga nuuca ilka badanka loo yaqaan ama Lakabka leh ay wayaan 90% ruux ay la wadaagaan nolosha taa oo logu macneeyay xasrada xooga leh ilkihiisa saaran, waxaana sidoo kale daraasada lagu ogaaday in haweenka inta badan aysan jecleen ragga nuucaasi ah.
Lakabka ayaa ah Ilko badan oo isa saaran kuwaa oo keena mararka qaarkood jahwareer dhanka Galmada ah gaar ahaan xiliga ciyaarta waxaana lagu bayaanshay daraasadaan in ragaasi inta badan ay waayaan qof si toos ah ula wadaagta nolosha waliba si kal-iyo-laab.
Amenty waxa ay ka mid tahay gabdhaha wax ka barta Jaamacada Oxford ee dalka Ingiriiska waxa ayna sheegtay xili laga wareesanayay TV ku yaal dalkaasi ragga nuuca ay jeceshay ” waa in uu yahay mid murug leh oo soo jiidasho leh kuma xujeynayo kalar ” ayay tiri gabadhaasi ayadoona sidoo kale gaashaanka ku dhufatay in ay necebtahay ragga Lakabka leh oo ku sheegtay in ay yihiin Shayaadiin ay ka dido.
” xiliga waxa ciyaarta ayaa waa xili aysan wanaagsaneen in lagu mashquulo wax ka baxsan Galmada” ayay tiri gabadhaasi ayadoona dhanka kale sheegtay in ragga nuceydaasi ah aysan waligeed la wadaagin xidhiidh haba yaraadee.
Daraasadaan ayaa waxa ay dhanka kale cuqdad ku beereysaa ragga nuucaasi ah ayadoona xiriirka labada dhinac ee ragga iyo dumarka inta badan uu ahaa mid lagu doorto wanaaga caqliga ama wada noolaashanha waxa ayna noqon doonto dhacdadaan mid haweenka ay iyana wax ku doortaan.
Title: Ragga Lakabka leh oo la ogaaday in xishood dartii ay ku waayaan…(Sirta Nolosha)